Pun Hlaing Lifestyle September Newsletter: Re-Opening of Estate, Country Club and Golf Club
Welcome to the September 2021 edition of Pun Hlaing Newsletter!
Firstly, we would like to thank the people of Pun Hlaing Estate for your resilience, patience, and cooperation. The pandemic has hadahuge impact on our community and now more than ever it’s important that we stick together.
In this newsletter, we are thrilled to announce the re-opening of the estate, country club, and golf club to residents and members following extensive measures of covid-19 protocols and we will be keeping you up to date on our ‘new normal’ initiatives and activities we have developed withacommitment to the health and well-being of our community.
ပန်းလှိုင်အိမ်ရာရဲ့ စက်တင်ဘာလ သတင်းစာစောင်မှ ကြိုဆိုပါတယ်။
ပထမဦး စွာ ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်းအိမ်ရာတွင်းမှာ နေထိုင်သူတွေရဲ့ ကြံ့ခိုင်မှု၊ စိတ်ရှည်သည်းခံမှုနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတို့ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ Covid-19 ကပ်ရောဂါသည်ကျွန်ုပ်တို့အသိုင်းအဝိုင်းအပေါ်ကြီးမားသောသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပြီးယခုထက်ပိုပြီးဆက်လက်ညီညွတ်မှုရှိကြရန်လည်းအလွန်အရေးကြီးပါသည်။
ယခုလအတွက်တော့ ကျွန်ုပ်တို့အနေနှင့် ပန်းလှိုင်အိမ်ရာ၊ ကလပ်နှင့် ဂေါက်ကွင်းအား အိမ်ရာနေသူများနှင့် မန်ဘာများအတွက်၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက် (သောကြာနေ့) မှစတင်၍ ကျန်းမာရေးနှင့်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကြိုတင်ကာကွယ်မှု လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်အညီပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်းကိုဝမ်းမြောက်စွာအသိပေးပြောကြားလိုပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ အိမ်ရာတွင်းမှာ နေထိုင်သူတွေရဲ့ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ကျန်းမာရေးနှင့်သာယာဝပြောရေးကိုကတိကဝတ်ပြုသောအားဖြင့်ပန်းလှိုင်အိမ်ရာကို နေထိုင်သူတွေအတွက် ပုံမှန်လူနေမှုပုံစံသစ် လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့ ရပ်ဝန်းလေးတစ်ခုဖြစ်ဖို့ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။
STAY SAFE, STAY HOME, GET VACCINATED
To help our community safe, the estate has arranged vaccination program exclusively for our residents on 11th September 2021 at Pun Hlaing COVID-19 Vaccine Centre - Hlaing Tharyar. For further inquiries about vaccination, reach out to info.cvc@punhlainghospitals.com.
ကျွန်ုပ်တို့သည် အိမ်ရာတွင်းမှာ နေထိုင်သူတွေ၏ လုံခြုံစိတ်ချရမှုအတွက် ကာကွယ်ဆေးထိုးအစီအစဉ်ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့တွင်ပန်းလှိုင် COVID -19 ကာကွယ်ဆေးစင်တာ- လှိုင်သာယာတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်စုံစမ်းမေးမြန်းလိုပါက info.cvc@punhlainghospitals.com သို့ဆက်သွယ်ပါ။
Estate has arranged vaccination for all our staff (front line & backline) from August 2021
WHAT’S ON: RETREAT & REJUVENATE
Time to grant the weary bodyareward and let us take care of the rest. Oasis Spa will be re-opening with strict safety measures from 10th September for our guests. Please book your appointment at Ext.1514 before arrival, walk-in guests are not allowed for safety measures.
တိတ်ဆိတ်အေးချမ်းတဲ့ spa နေ့လေးဖန်တီးဖို့အတွက် နေရာကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Oasis Spa ကို စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက် (သောကြာနေ့) မှစတင်ပြီး ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါပြီနော်။ ဘိုကင်ပြုလုပ်ရန် Ext: 1514 သို့အခုပဲ ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီး ဆက်သွယ်လိုက်တော့နော်။
Oscar, The Cigar Bar and Horizons are fully open including dine-in from 10th September. Enjoy our delicous Asian and Western dishes and drinks for dine-in and take advantage of our weekly promotions.
Oscar၊ The Cigar Bar ၊ Horizons တို့မှာ လာရောက်သုံးဆောင်နိုင်သလို၊ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ Promotion အစီအစဥ်တွေလည်းပေးလျက်ရှိပါတယ်နော်။ events@aweimetta.com (သို့) 01 3684475 သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
DISCOVER NEW KIDS MENU
Hello parents and kids! We are very excited to introduce you that we are launching our new kid's menu at Oscar Restaurant with many awesome kiddies favorites. We hope to see you soon!
မိဘများနှင့်ကလေးများမင်္ဂလာပါ။ စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့ကစပြီးအော်စကာစားသောက်ဆိုင်မှာ ကလေးတွေအတွက်မီနူး အသစ်တွေရရှိနေပြီဆိုတာဝမ်းသာစွာအသိပေးလိုက်ပါတယ်။ အားပေးကြဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
RENT YOUR NEXT HOME AT PUN HLAING ESTATE
Monsoon Flash Deals For Rental Properties
Looking for good savings on renting an apartment? Take advantage of Monsoon Flash Deal for Lakeview apartment at Pun Hlaing Estate. These3bedrooms apartments with spacious balconies will provide the amazing view and freshness of the season.
30% discount on minimum one-month rental
Booking fee 50% is required and non-refundable
Move in before October 2021 (Only for selected properties)
To book, please call Pun Hlaing’s Leasing team at 09777229339 or punhlaingrentals@yomaland.com.
ပန်းလှိုင်၏ မိုးရာသီအထူးအစီအစဥ်အဖြစ်30% Discountရရှိနိုင်မယ့် အခွင့်အရေး
မိုးရာသီမှာ စိမ်းလန်းစိုပြည်တဲ့ ရှုခင်းနဲ့ အတူ သာယာလှအေးချမ်းလှတဲ့ နေရာလေးတစ်ခုကို ရှာဖွေနေပါသလား?
အိပ်ခန်း ၃ ခန်းပါဝင်ပြီး ကျယ်ဝန်းသော ဝရန်တာပါရှိတဲ့Lakeview apartment
အောက်တိုဘာလ ၂၀၂၁ မတိုင်ခင်Check-inဝင်ရန်
လွယ်ကူသော ငွေပေးချေမှုBank transfer
အသေးစိတ်ပိုမို သိရှိလိုပါက ပန်းလှိုင်Leasing Teamဖုန်းနံပါတ် ၀၉၇၇၇၂၂၉၃၃၉ သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
LANDSCAPING & HOUSEKEEPING SERVICES
Our landscaping and housekeeping teams are providing the best service to ensure your home clean and maintaining your plants. Give us as many instructions as you’d like, and we will buildaplan to your expectation! Dial0from within the estate for your booking.
မိမိရဲ့ နေအိမ်လေးကို အမြဲတမ်းတောက်ပြောင်သန့်ရှင်းလှပနေဖို့ သစ်ပင်ပန်းမန်လေးတွေစိမ်းစိုလှပနေဖို့ဆိုရင် ပန်းလှိုင်အိမ်ရာက အိမ်သန့်ရှင်းရေးအဖွဲ့ နဲ့ ပန်းမန်အလှဆင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကို သတိရလိုက်ပါ။ လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း စိတ်တိုင်းကျ ပြုလုပ်ပေးဖို့ အဆင်သင့်ရှိလို့နေပါတယ်။ Ext နံပတ်0ကို ခေါ်ယူပြီး ဝန်ဆောင်မှုတွေ ရယူရန်အတွက် ဘိုကင်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
If you would like to contribute any article or share your feedback with us, please send winpapamyo@yomaland.com your thoughts and suggestions.
ပန်းလှိုင်သတင်းစာစောင်မှာ ဆောင်းပါးထည့်သွင်းလိုလျှင်ဖြစ်စေ၊ အကြံဥာဏ်များပေးပို့လိုလျှင်ဖြစ်စေ winpapamyo@yomaland.com သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။